ဝမှ လှတာဆိုသူများ သတိထား ! အဝလွန်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကြောက်မက်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ ဘေးအန္တရာယ် ကပ်ဆိုးကြီး. . - Myanmar People Alliance
ဝမှ လှတာဆိုသူများ သတိထား ! အဝလွန်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကြောက်မက်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ ဘေးအန္တရာယ် ကပ်ဆိုးကြီး. .
ဝတဲ့သူတွေ သတိထား! ကားနဲ့ ရေတိမ်တိမ်လေးထဲမှာ ကျခဲ့ပေမယ့် လူက,၀လွန်းလို့ မထွက်နိုင်ဖြစ်ကာ ရေတိမ်နစ်သေဆုံးခဲ့ရသူ..
ကမ္ဘောဒီယား နိုင်ငံ ကပေါင်းကျန် ပြည်နယ် က လွှတ်တော်အမတ် တစ်ဦး မောင်းလာတဲ့ကား ရေထဲထိုးကျတိမ်းမှောက်သွားခဲ့တာပါ။
သူဟာ အစားများပြီး အ၀ လွန်နေသူဖြစ်လို့ရေနစ်နေတဲ့ ကားထဲက မထွက်နိုင် ဖြစ်ပြီး ရေတိမ်နစ် သေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ စုံစမ်းလေ့လာသူတွေက သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ဝနေခြင်းဟာ ကြောက်မက်ခြောက်ခြားတုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ ကပ်ဆိုးကြီးတစ်ခုလား ?
၂၀၁၉ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့လူဦးရေဟာ သန်းပေါင်း ၇၇၀၀ ရှိလာရာမှာ သန်း ၂၀၀၀ ကျော်ဟာ အ၀လွန်နေကြသူတွေလို့စစ်တမ်းတွေအရ သိရပြီးဝလွန်းလို့ေ၇ာဂါစုံနဲ့သေဆုံးနေ၇ာသူပေါင်း တနှစ်ကိုသုံးသန်းကျော် ၇ှိနေပါတယ်။
၀င်ငွေကောင်းပြီး လူးတန်းစေ့နေနိုင်သူတွေဟာ ဘီယာနဲ့အဆီအဆိမ့် တွေ အစားသောင်းကျန်း ပြီး ၀လွန်းတဲ့သူတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ရောဂါများပြီး ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကို ကုန်တိုက် ရှော့ပင်ထွက်နေသလို အမြဲ ပြနေကြ ရတဲ့ သူတွေဖြစ်လာကာ အသက်တိုပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လူတွေတင်မက ဘုန်းကြီးတွေပါ အ၀ လွန်လာလို့ကျောင်းတိုက်တွေမှာ ကျန်းမာရေး ပညာပေးနေရပါတယ်။ဝလာသူတိုင်းဟာ ဗိုက်ပူလာတာက အစာအိမ်တွင်းက အူတွေဖေါင်းပွပြီး ကြပ်လာတာပါ။
အူလမ်းကြောင်း တွေမှာ အဆီတွေပိတ်လာတာနဲ့ သွေးလည်ပါတ်မှုစနစ်ကိုပါ ထိခိုက်ပြီး သွေးလေမူမမှန် ခေါင်းမူးတာ ခေါင်းကိုက်တာ အကြောတက်တာတွေ မကြာခဏ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေကြသူ သုံးဦးမှာ နှစ်ဦးဟာ အ၀လွန်နေတဲ့သူများပါတယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ကျန်းမာရေး အာမခံစနစ်ကောင်းလို့ပြည်တွင်းမှာသာမက ပြည်ပမှာ ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ အထူးကုဆေးရုံတွေမှာ ကျန်းမာရေး အာမခံကဒ်ပြားသုံးပြီး ကုသခွင့် ရနေတော့ အေးဆေးပဲဆိုတဲ့ . . .
ဝလွန်းသူ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ ဆေးရုံဟာ သူ့ရဲ့မယားငယ်အိမ်လို ဖြစ်လို့ နေပါတော့တယ်။သူ့ကို သတိရလို့ဖုန်းဆက်တိုင်း ဆေးရုံေ၇ာက်နေတယ် /ဆေးရုံတက်နေတာဆိုပြီး ပြန်ဖြေခေ့ရှိတာ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
အ၀လွန်တဲ့ သူတိုင်း အဖြစ်များတဲ့ေ၇ာဂါတွေဟာ. .
Type2Diabetes ဆီချို , High Blood Pressure သွေးပေါင်ချိန်တက်, Heart Disease နှလုံးေ၇ာဂါ, Stroke လေဖြတ်, Cancer ကင်ဆာ. .
Sleep Apnea အိပ်ပျော်နေချိန် အသက်ရူရပ်တန့် , Osteoarthritis အရိုးအဆစ်ရောင် ခြင်း လမ်းမလျှောက်နိုင်ဖြစ်။Fatty Liver Disease အသဲအဆီဖုံး, Kidney Disease ကျောက်ကပ်, Pregnancy Problemsကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ မွေးရခက်ခဲ အသက်သေဆုံးရ စသည့်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားမှု ပိုးများပါတယ်. . ။
အကောင်းဆုံးကတော့ မိမိကိုယ် ပေါင်ချိန်တွေ တက်မလာအောင်သကြားများတဲ့အစားအသောက်တွေလျှော့ စား အချို အဆီအဆိမ့် တွေ များများမစားမိအောင်သတိထားေ၇ှာင်ရမှာ ပါ။
ကိုယ်တွင်းမှာ အဆီချပေးနိုင်တဲ့အသီးအရွက်ဖျော်ရေကိုပုံမှန်သောက်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အားကစားတစ်ခုကို ပုံမှန် လုပ်ပေးဘို့လိုပါတယ်။
အကောင်းဆုံးက ငွေကုန်သက်သာတဲ့လေကောင်းလေသန့် ရတဲ့ နေရာမှာ တနာရီခန့် လမ်းလျှောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စော
ဝတဲ့သူတှေ သတိထား! ကားနဲ့ ရတေိမျတိမျလေးထဲမှာ ကခြဲ့ပမေယျ့ လူက,ဝလှနျးလို့ မထှကျနိုငျဖွဈကာ ရတေိမျနဈသဆေုံးခဲ့ရသူ..
ကမ်ဘောဒီယား နိုငျငံ ကပေါငျးကနျြ ပွညျနယျ က လှတျတျောအမတျ တဈဦး မောငျးလာတဲ့ကား ရထေဲထိုးကတြိမျးမှောကျသှားခဲ့တာပါ။
သူဟာ အစားမြားပွီး အ၀ လှနျနသေူဖွဈလို့ ရနေဈနတေဲ့ ကားထဲက မထှကျနိုငျ ဖွဈပွီး ရတေိမျနဈ သဆေုံးခဲ့ရတာဖွဈတယျလို့ စုံစမျးလလေ့ာသူတှကေ သုံးသပျပွောဆိုခဲ့ကွပါတယျ။
အဝလှနျခွငျး (သို့မဟုတျ) ဝနခွေငျးဟာ ကွောကျမကျခွောကျခွားတုနျလှုပျဖှယျရာ ကပျဆိုးကွီးတဈခုလား ?
၂၀၁၉ ခုနှဈ ကမ်ဘာ့လူဦးရဟော သနျးပေါငျး ၇၇၀၀ ရှိလာရာမှာ သနျး ၂၀၀၀ ကြျောဟာ အဝလှနျနကွေသူတှလေို့ စဈတမျးတှအေရ သိရပွီးဝလှနျးလို့ ရောဂါစုံနဲ့ သဆေုံးနရောသူပေါငျး တနှဈကိုသုံးသနျးကြျော ၇ှိနပေါတယျ။
ဝငျငှကေောငျးပွီး လူးတနျးစနေ့နေိုငျသူတှဟော ဘီယာနဲ့ အဆီအဆိမျ့ တှေ အစားသောငျးကနျြး ပွီး ဝလှနျးတဲ့သူတှဖွေဈလာပါတယျ။ ရောဂါမြားပွီး ဆေးရုံဆေးခနျးတှကေို ကုနျတိုကျ ရှော့ပငျထှကျနသေလို အမွဲ ပွနကွေ ရတဲ့ သူတှဖွေဈလာကာ အသကျတိုပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံမှာ လူတှတေငျမက ဘုနျးကွီးတှပေါ အ၀ လှနျလာလို့ ကြောငျးတိုကျတှမှော ကနျြးမာရေး ပညာပေးနရေပါတယျ။ဝလာသူတိုငျးဟာ ဗိုကျပူလာတာက အစာအိမျတှငျးက အူတှဖေေါငျးပှပွီး ကွပျလာတာပါ။
အူလမျးကွောငျး တှမှော အဆီတှပေိတျလာတာနဲ့သှေးလညျပါတျမှုစနဈကိုပါ ထိခိုကျပွီး သှေးလမေူမမှနျ ခေါငျးမူးတာ ခေါငျးကိုကျတာ အကွောတကျတာတှေ မကွာခဏ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
အမရေိကနျနိုငျငံမှာ နထေိုငျနကွေသူ သုံးဦးမှာ နှဈဦးဟာ အဝလှနျနတေဲ့သူမြားပါတယျ။ အမရေိကနျရဲ့ ကနျြးမာရေး အာမခံစနဈကောငျးလို့ ပွညျတှငျးမှာသာမက ပွညျပမှာ ရှိနတေဲ့ နိုငျငံတှရေဲ့အထူးကုဆေးရုံတှမှော ကနျြးမာရေး အာမခံကဒျပွားသုံးပွီး ကုသခှငျ့ ရနတေော့ အေးဆေးပဲဆိုတဲ့ . . .
ဝလှနျးသူ သူငယျခငျြးတဈယောကျကတော့ ဆေးရုံဟာ သူ့ရဲ့မယားငယျအိမျလို ဖွဈလို့ နပေါတော့တယျ။သူ့ကို သတိရလို့ ဖုနျးဆကျတိုငျး ဆေးရုံရောကျနတေယျ /ဆေးရုံတကျနတောဆိုပွီး ပွနျဖွခေရှေိ့တာ ကိုယျတှဖွေ့ဈပါတယျ။
အဝလှနျတဲ့ သူတိုငျး အဖွဈမြားတဲ့ ရောဂါတှဟော. .
Type2Diabetes ဆီခြို , High Blood Pressure သှေးပေါငျခြိနျတကျ, Heart Disease နှလုံးရောဂါ, Stroke လဖွေတျ, Cancer ကငျဆာ. .
Sleep Apnea အိပျပြျောနခြေိနျ အသကျရူရပျတနျ့, Osteoarthritis အရိုးအဆဈရောငျ ခွငျး လမျးမလြှောကျနိုငျဖွဈ။Fatty Liver Disease အသဲအဆီဖုံး, Kidney Disease ကြောကျကပျ, Pregnancy Problemsကိုယျဝနျဆောငျမိခငျမြား မှေးရခကျခဲ အသကျသဆေုံးရ စသညျ့ရောဂါမြား ဖွဈပှားမှု ပိုးမြားပါတယျ. . ။
အကောငျးဆုံးကတော့ မိမိကိုယျ ပေါငျခြိနျတှေ တကျမလာအောငျသကွားမြားတဲ့ အစားအသောကျတှလြှေော့ စား အခြို အဆီအဆိမျ့ တှေ မြားမြားမစားမိအောငျသတိထားရှောငျရမှာ ပါ။
ကိုယျတှငျးမှာ အဆီခပြေးနိုငျတဲ့ အသီးအရှကျဖြျောရကေိုပုံမှနျသောကျပေးရပါလိမျ့မယျ။ ဒါ့အပွငျ မိမိကွိုကျနှဈသကျတဲ့ အားကစားတဈခုကို ပုံမှနျ လုပျပေးဘို့ လိုပါတယျ။
အကော ငျးဆုံးက ငှကေုနျသကျသာတဲ့ လကေောငျးလသေနျ့ရတဲ့ နရောမှာ တနာရီခနျ့လမျးလြှောကျပေးခွငျးဖွဈပါတယျ။စော
Health, Knowledge, News, Uncategorized